श्रीओम श्रेष्ठ‘रोदन’ Archives | साहित्यपोस्ट
श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’	 ९ भाद्र २०७८ १०:०१ 0
साहित्यमा लेख्ने धेरै छन् कविता । निस्कन्छन् पुस्तक पनि धेरै कविताकै । कविता नै बनेको छ सिर्जनाको प्रारम्भबिन्दु । चिनिन्छन् पनि कविताबाटै धेरै । भए पनि धेरै जना कवि । कविताको उन्नयन गर्ने भने छन् धेरै कम । धेरै नै कम । नाम छन् थोरै…
श्रीओम श्रेष्ठ रोदन	 १३ श्रावण २०७८ १०:०१ 0
परिरहेको छु अलमलमा । गरूँ कहाँबाट सुरु ? सम्झिनासाथ नाम । आँउछन् सन्दर्भहरू जोडजोडले । नजिक छन् सबै नजिकै भएका । छोड्नु कुनलाई ? बिर्सनु केलाई ? परेको छु धर्मसङ्कटमा । क्याप्टेनसाप अर्थात् क्याप्टेन जनकबहादुर राणा । रिटार्यड…
श्रीओम श्रेष्ठ रोदन	 ३० असार २०७८ १०:०१ 0
हुन्न, सोचेजस्तो हुन्न जीवन । नहुन पनि सक्छ हुनु पर्नेजस्तो । रङ्गीन छ पलपलको समय र यथार्थ पनि । मिल्ने पनि र नमिल्ने पनि । गर्ने कर्म आफ्नै हो । हुन्छ नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेमा । सत्य मात्र नहुनसक्छ पूर्ण कहिले । गर्नुहुन्न त्यसैले…
श्रीओम श्रेष्ठ रोदन	 २३ असार २०७८ १०:०१ 0
अनेक बाटा छन् उज्यालो भेट्ने । मात्र कुन बाटाबाट कसरी जाने भन्ने हो । जहाँबाट गए पनि उज्यालो नै भेटिनुपर्‍यो । आफ्नै पाइला परेकालाई मात्र सत्य ठान्नु भ्रम हो । सत्य हुन् सबै बाटा, गर्ने यात्रा मात्र हुन् फरक । सिर्जना शक्तिको अभिलेख…
श्रीओम श्रेष्ठ रोदन	 २ असार २०७८ १०:०१ 0
कसैलाई चिनेँ भन्नु एउटा स्वादिलो भ्रमजस्तै रहेछ । मान्छेले मान्छेलाई चिन्नुजस्तो गाह्रो अरू केही हुँदैन रहेछ । देख्दैमा, भेट्दैमा, सहकार्य गर्दैमा कसैले कसैलाई चिन्न सकिँदैन । हो, चिनेजस्तो भने मज्जाले लागिरहन्छ । भन्ने हो भने आफू र…
डाक्साप ! सधैँ अरूका लागि
श्रीओम श्रेष्ठ रोदन	 १२ जेष्ठ २०७८ १०:०१ 0
देखिएका सबै सत्य हुँदैनन् भन्ने जानेकै हुन् धेरैले । भन्नेहरु जीवनलाई रङ्गमन्च भनिरहेका छन् । हामी अभिनय गरिरहने पात्र मात्र पनि भनिरहेका छन् । हो पनि, जीवन कुनै सुनिश्चित हुँदैन । न तिथि न मिति । सुरु भएको निश्चित समय हुने त्यसपछिका…
श्रीओम श्रेष्ठ रोदन	 ११ फाल्गुन २०७७ १८:०१ 0
मञ्चको अगाडि सयौँ टेलिभिजनका क्यामराहरु थिए । भित्तामा एकताको ठूलो व्यानर टाँसिएको थियो । फरक विचारका दुई अध्यक्षले एकअर्काको हात समातेर उठाए । अँगालो मारे । कक्रक्क हुने गरी हात मिलाए । त्यसपछि दुवैले मुठ्ठी कसेर उठाए । तालीको…
चिन्तामणिको चिन्तन रहस्य !
२२ पुष २०७७ ०६:०२ 0
चिन्तामणि जोगी बन्नुपर्ने मान्छे होइनन् । देखिइने जस्ता जोगी पनि होइनन् उनी । जातले त जोगी नै हुन् तर जातले मात्र को पो जोगी बनेका छन् र ?
तीन लघुकथा श्रृंखला – १६
२१ पुष २०७७ १७:०१ 0
१. पहिलो लघुकथा (हस्तलिखित लघुकथा संग्रह) सौहार्दता श्रीओम श्रेष्ठ "रोदन" रातको दस बजेको थियो । बाटामा राखिएका सम्पूर्ण बत्तीहरू फुटिसकेका थिए । त्यसैले सडक पूर्ण अँध्यारो बनेको छ र एक्लो भएको छ । शून्यता र रातको एकीकरणले…